SWEDEN: Ninkii sawir-gacmeedka ka sameeyay nabi Muxammed (NNKH) oo shil gaari ku geeriyooday : Calanka.com
SWEDEN: Ninkii sawir-gacmeedka ka sameeyay nabi Muxammed (NNKH) oo shil gaari ku geeriyooday
Wararka naga soo gaaraya dalkaasi Sweden ayaa waxa ay sheegayaan in Ninkii sawir-gacmeedka ka sameeyay nabi Muxamed (NNKH) ee Lars Vilks iyo labo boolis dhar-cad ah oo la socday ay ku dhinteen shil gaari kaas oo ka dhacay mid ka mid ah waddooyinka dalkaasi.
Baabuurka ay shilka ku galeen ayaa ahaa mid ay boolisku lahaayeen ee nooca aan buufsaneyn ah, waxaana la sheegay in baabuurkooda uu wadada ka baxay islamarkaana uu ku dhacay gaari xamuul ah oo dhinaca kale ee wadada marayay.
Lars Viks ayaa dhowr jeer ka bad-baaday isku-day dil, waxaana uu daganaa meel sir ah oo aan cinwaankeeda bulshada lala wadaagin.
Waxaa uu isku-dayada dilalka, hanjabaadaha iyo dhuumashada uu ku muteystay sawir-gacmeed uu dhowr sano ka hor ka sameeyay nabi Muxammed (NNKH) kaas oo ay bulshada Islaamka gudaha Sweden iyo dibeddaba ka caroodeen, lagana bannaan-baxay.
” – Mar hore ayaa iigu dambeysay nolol caadi ah oo aan ku noolaado. Ma ahan wax fiican laakiin waa la i amaanay oo dunida oo dhan ayaa la iga dhiirigeliyay. Hanjabaadana nolosheyda qeyb ka mid ah ayay noqotay”, sidaa ayuu yiri Lars mar uu isbuuc ka hor wareysi siiyay jaraa`idka Dagbladet ee dalka Sweden.
Sarkaal u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Anders Jakobsson ayaa sheegay in ay arrintani u muuqato shil balse ay wali marayaan qeybaha ugu horreeya baaritaanka.
Wasiiradda dhaqalka dalka Sweden Amanda Lind oo iyana barteeda twitterka kaga hadashay geerida Lars ayaa waxa ay tiri ” – Waa nasiib-darro in nolosha Lars Vilks ay sidan kusoo gabo-gabowdo”.
Shilkan uu ku geeriyooday Lars Vilks ayaa dhacay shalay oo Axad ahyed.